Dehydration (ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Dehydration (ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးခြင်း)
Dehydration (ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးခြင်း) ကဘာလဲ။
ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးခြင်း ဆိုတာ မိမိသောက်သုံးတဲ့ရေပမာဏထက် ဆုံးရှုံးမှုကပိုများနေတဲ့အခါ ဖြစ်လာတဲ့ အခြေအနေတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမမျှတမှုဟာ သွေးထဲက ဆား၊ သတ္တုဓါတ်နဲ့ သကြားပမာဏတွေကို ကမောက်ကမ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါဆိုရင်ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဟာ ထိခိုက်လာပြီး အလွန်အန္တရာယ်များစေပါတယ်။
Dehydration (ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးခြင်းဟာ အလွန်အဖြစ်များပါတယ်။ အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ နေ့စဉ် အသက်ရှူထုတ်တိုင်း ရေဓါတ်ဟာ ကျွန်ုပ်တို့ ခန္ဓါကိုယ် ကနေ ဆုံးရှုံးသွားပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နေ့စဉ် ချွေး၊ ဆီး၊ ဝမ်းတွေမှာလည်း ရေဓါတ်တွေပါသွားပါတယ်။
တကယ်လို့သာ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ ရေဓါတ်ပမာဏကို လုံလောက်သော ရေ(သို့) အရည်များနဲ့ ပြန်လည် မဖြည့်တင်းနိုင်လျှင် ရေဓါတ်ချို့တဲ့ခြင်းကို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Dehydration (ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက်တွေကို သင့်ခန္ဓါကိုယ် မှာ မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးခြင်းရဲ့ အဖြစ်အများဆုံး လက္ခဏာတွေကတော့
• မူးဝေခြင်း (သို့) အထိုင်အထတွင် မိုက်ခနဲဖြစ်ခြင်း
• ဆီးအရောင်ရင့်ခြင်း( အဝါရောင်ရင့်ရင့်)
• အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်း စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။
ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးခြင်းဟာ အဖြစ်များသော်လည်း မကုသဘဲထားလျှင် အလွန်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။
• နှစ်ရက်ထက်ပို၍ ဝမ်းလျှောခြင်း
• အာရုံစူးစိုက်၍ မရခြင်း
• ရင်ဘတ် (သို့) ဗိုက်နာခြင်း စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။
Dehydration (ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးခြင်းဟာ များသောအားဖြင့် လုံလောက်တဲ့ အရည်ပမာဏကို မသောက်သုံးလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားအချက်တွေ အနေနဲ့ကတော့ ရာသီဥတု၊ လှုပ်ရှားသွားလာမှုနဲ့ အစားအသောက် စတာတွေပေါ်လည်း မူတည်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကြာရှည်ဝမ်းလျှောခြင်း၊ အန်ခြင်းနဲ့ ဆီးချိုရောဂါ စတာတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Dehydration (ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
မွေးကင်းစ ကလေးတွေနဲ့ ကလေးငယ်တွေမှာ ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးမှုပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့လေးတွေဟာ ကိုယ်အလေးချိန်နည်းတဲ့အတွက် ရေဓါတ်အနည်းငယ်မျှ ဆုံးရှုံးရုံနဲ့ ပိုသိသိသာသာ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
သက်ကြီးရွယ်အိုတွေဟာလည်း ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ဖို့ ပိုအခွင့်အလမ်းများပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ဟာ ရေသောက်ဖို့ မေ့နေတတ်သလို ရေသောက်ဖို့ လိုနေတယ်ဆိုတာ
ဆီးချိုရောဂါရှိသူ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါရှိသူနဲ့ အရက်စွဲသူများလို နာတာရှည်ရောဂါသည်များ သည်လည်း ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးခြင်းကို ခံစားရလေ့ရှိပါတယ်။
အားကစားသမားများ အထူးသဖြင့် မာရသွန်ပြေးပွဲ၊ ရေကူး၊ မြင်းစီးပြိုင်ပွဲများနဲ့ ပြိုင်ပွဲပေါင်းစုံတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သူ များမှာ ချွေးမှတစ်ဆင့် ခန္ဓါကိုယ်မှ အရည်များ ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်။
ဆောက်လုပ်ရေးဆိုက်ထဲမှ အလုပ်သမားများကဲ့သို့ လက်ရုံးအားကိုးရသူများဟာလည်း နေနဲ့ ပုံမှန်ထိတွေ့ပြီး ချွေးထွက်ခြင်းမှတစ်ဆင့် ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးရလေ့ရှိပါတယ်။
Dehydration (ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်က အမျိုးမျိုးသော ရိုးရှင်းတဲ့ စမ်းသပ်မှုတွေ လုပ်ပါလိမ့်မယ် (သို့) သွေး နဲ့ ဆီးနမူနာကို ဓါတ်ခွဲခန်းသို့ ပို့ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။
• ဆရာဝန်က ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးမှုဟုတ်မဟုတ်ကို အဖြေရှာရန် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုအချို့ပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ သတိကောင်းကောင်းလည်ရဲ့လား၊ သွေးပေါင်ကျနေလား၊ နှလုံးခုန်မြန်နေ၊ ရင်တုန်နေလား၊ ဖျားနေလား၊ အရေပြားမတင်းရင်းတော့ဘူးလား စသဖြင့် စမ်းသပ်ပါလိမ့်မယ်။
• ကျောက်ကပ်ကောင်းကောင်း အလုပ်သလားဆိုတာကို သိဖို့နဲ့ ခန္ဓါကိုယ်မှ ဆိုဒီယမ်၊ ပိုတက်ဆီယမ်၊ အခြားဓါတ်တွေရဲ့ ပမာဏသိရန် သွေးစစ်ပါလိမ့်မယ်။
• ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးနေတဲ့သူ တစ်ယောက်ဟာ ဆီးအရောင်ရင့်ပြီး ပိုပျစ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဆီးစစ်ခြင်းဟာလည်း ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးမှုအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ စစ်ဆေးမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာဝန်တွေက မွေးကင်းစကလေးတွေမှာ ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးမှုရှိမရှိကို ငယ်ထိပ်၊ ချွေးနဲ့ အချို့ကြွက်သားတွေရဲ့ ပြုမူပုံတွေကို စစ်ဆေးလေ့ရှိကြပါတယ်။
Dehydration (ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
သင့် ခန္ဓါကိုယ်မှ ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြည့်တင်းဖို့ရာ ရေ၊ သခွားမွှေး၊ ဖျော်ရည်စတဲ့ အရည်များများကို သောက်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ သို့သော် ကဖင်းဓါတ်ပါသော၊ အမြုပ်ထသော သောက်စရာများကိုတော့ ရှောင်ကြဉ်ပါ။ မွေးကင်းစနဲ့ ကလေးငယ်လေးတွေမှာ ရေဓါတ်ချို့တဲ့လာရင် ရေမတိုက်သင့်ပါဘူး။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ခနွာကိုယ်ထဲမှာ နည်းပြီးသားဖြစ်နေတဲ့ ဓါတ်ဆားနဲ့ သတ္တုဓါတ်တွေကို အားပိုပျော့အောင် လုပ်သလို ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းက ပိုတက်စီယမ်၊ ဆားနဲ့ သကြား ရောထားတဲ့ ရေဓါတ်အားဖြည့် ဓါတ်ဆားရည်ကို သောက်သုံးပြီး ကိုယ်တွင်းရေဓါတ်များ ပြန်လည်ရရှိဖို့ ထောက်ခံလမ်းညွန်ထားပါတယ်။
ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးမှုအရမ်းလွန်ကဲနေသော အခြေအနေမှာတော့ ဆေးရုံကိုသွားဖို့ လိုအပ်ပြီး သင့်ဆရာဝန်နဲ့ တွေ့ဆုံကာ သင့်တော်တဲ့ဆေးဝါးကုသမှုခံယူခြင်းဟာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ညွန်ကြားတဲ့ဆေးတွေမှာ ဝမ်းပိတ်ဆေး၊ အအန်ပျောက်ဆေးနဲ့ အဖျားကျဆေးတွေ ပါနိုင်ပါတယ်။
Dehydration: Symptoms, Causes, Treatments.
http://www.medicalnewstoday.com/articles/153363.php?page=2. Accessed June 12, 2016.
Dehydration in Adults. http://www.webmd.com/a-to- z-guides/dehydration- adults?page=2. Accessed June 12,2016.
What is Dehydration? http://www.news-medical.net/health/What- is-Dehydration.aspx. Accessed June 12,2016.Dehydration: Symptoms, Causes, Treatments.
What is Dehydration? http://www.news-medical.net/health/What- is-Dehydration.aspx. Accessed June 12,2016.